Ma loolan siyaasadeed ayaa u dhaxeeya madaxweyne Mustafe Cagjar iyo Axmed Shide? - BBC News Somali
Ma loolan siyaasadeed ayaa u dhaxeeya madaxweyne Mustafe Cagjar iyo Axmed Shide?
23 Jannaayo 2019
Image caption Axmed Shide iyo Madaxweyne Mustafe Cagjar
Dad badan waxay aaminsan yihiin in madaxweynaha deegaanka uu caqabada ugu badan kala kulmayo siyaasiyiin horay uga tirsanaa xukuumaddii hore oo aan la dhacsaneyn qaabka uu wax u wado, ayna doonayaan in markale qeyb ka noqdaan golaha fulinta ee xisbiga dowlad deegaanka, mowqifkaasi oo uu taageersan yahay Axmed Shide, Guddoomiyaha Xisbiga talada haya ee deegaanka.
"Dad badan oo indha indheeya siyaasadda deegaanka waxay aaminsan yihiin in uu hogaamiyay isbadel shacab oo lagaga gudbay marxaladii hore, tusaale ahaan xagga hadalka iyo xoriyadda wadankani soddonkii sano kama jirin, halmar ayuu albabada u furay, waxayna keentay su'aalo badan, wuxuu furay noolashii iyo dhincii dhaqaalihii oo uu yiri shacabka way u siman yihiin ganacsiga, taasi na waxaa laga yabaa in qeyba kale oo masaalix dhaqale laheyd inay ka xanaajisay," Sidaas waxaa yiri Ibraahim Dheere oo ah guddoomiyahii Jabhadii Xoreynta Soomaali Galbeed.
Ibrahim Dheere ayaa intaa raaciyay in Mustafa uu soo kordhiyay arrimo aan horey uga jirin deegaanka.
"Calaaqaad dowli ah oo aan hadda kahor gobolka laga aqoonin ayuu sameeyay, wxaaan isleeyahay amuurahaasi oo dhan marka la isku geeyo armay Mustafe ku shiday iftiinka oo la is leeyahay xowligii loogu talo galay waa uu ak dheereynayaa," ayuu yiri Ibrahim Dheere.
Inkastoo aysan si rasmi ah usoo shaac bixin waxa ay isku hayaan labada dhinac ayaa haddana dadka qaar ee fallanqeeya arrimaha siyaasadda waxa ay aaminsan yihiin in la isku hayo cidda qeyb ka noqoneysa golaha fulinta ee xisbiga dowlad deegaanka oo lagu wado in uu dhawaan yeesho shirweyne.
"Waxa la isku hayo waa arrin muddo sii jiitameysay, meeshan na waxaa is dulsaaran laba arrimod. Xisbigii hore ee dalka ka talinayay oo dhibaatooyinkii jiray qeyb ka ahaa iyo isbadel cusub oo ay kusoo biireen rag cusub oo siyaasiyiin ahaa, marka aragtida dhabta ah ee la isku haya waxa weeye gobolka Soomaalida ma dimuqraadiyad iyo isla xisaabtan, dowlad wanaag, sharci iyo kala dambeyn ayuu u jiheysta mise nidaaamkii hore ayaa dib loo soo celiyaa oo xisbiga waxaa laga buuxiyaa dadkii ka tirsanaa nidaamkii hore".Ayuu yir Ciid Badal oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika.
Image caption Isku dhacyada Soomaalida iyo Oromada ayaa galaafatay noolasha dad badan
Madaxweynaha Dowlad Deegaanka ayaa tan iyo intii uu xilka qabtay waxaa soo food saaray caqabado badan oo ay ka mid yihiin arrinta isku dhaca qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada, oo uu meel adag ka istaagay, isagoo na horay u sheegay in isbadel uu ka dhacay deegaanka Soomaalida, balse xagga Oromada uusan wax isbadel ah ka dhicin.
Awoodda Xisbiga ayaa u muuqata inay sababtay loollan adag oo u dhexeeya madaxweynaha deegaanka, Mustafa Cagjar, iyo Gudoomiha Xisbiga, Axmed Shide.
Shide waxaa uu ku xiran yahay dowladda federaalka Itoobiya, wuxuuna horay u soo noqday wasiirkii warfaafinta, haatanna waa wasiiraka maaliyadda ee dalka Itoobiya. Waxaa muuqata inuu saameyn badan ku leeyahay siyaasadda deegaanka.
Image caption Isku dhacyadii sannadkii hore ka dhacay magaalada Jigjiga
Mustafe Cagjar ayaa la sheegayaa inuu ku dheggan yahay in xubnihii la soo shqeeyay Madaxweynihii hore ee deegaanka, Cabdi Maxamuud Cumar, laga saaro golaha fulinta ee xisbiga.
Waxaan marnaba qorsaooneyneyn in siyaasadda deegaanka aysan marwalba ka marneyn hadba cida heysa talada dalkaa Itoobiya, taa oo dadka qaar ay aaminsan yihiin in madaxweyne Cagjar uu su'aal geliyay, doonaya na in go'aanada siyaasadeed ee Jigjiga ay nqodaan kuwa ka madaxbanaan Addisabab, si lamid ah gobolada kale ee Itoobiya, balse waxaa la is-weydiinayaa suurtgalnimada arrintaasi oo aan muddooyinkii dambe looga baranin deegaanka Soomaalida.
Su'aasha ugu weyn ee dadka deegaanka is weydiinayaan waxay tahay, in murankani uu galaafan doono Mustafe Cagjar, iyo inuu wiiqi doono saameynta Axmed Shide, oo ay xulafo yihiin dowladda federaalka Itoobiya.